IYork Harbor Inn- Country Inn Room - I-Airbnb
IYork Harbor Inn- Country Inn Room
Efumaneka kwi-Main Inn, Amagumbi ethu e-Land Inn ngamagumbi amancinci kodwa akumgangatho ophezulu akwinqanaba lesibini. Zonke zihonjiswe ngebhedi enkulu enye eneebhafu zabucala nezinto ezinokusetyenziswa eziqhelekileyo. La magumbi anamagumbi okuhlambela amancinci kunye namagumbi okulala. Amagumbi aquka isidlo sethu sakusasa ne-wifi. La magumbi awabonakali kakuhle elwandle, kodwa ulwandle lukumgama okufuphi ngeenyawo.
Onke amagumbi okuhlala aqhelekileyo, indawo yokutyela ekwindawo yokutyela kunye neepayile ezingaphandle, iidekhi kunye nebhafu eshushu yangaphandle. Hamba unqumle isitrato uye kwi-Hartley Mason Reserve entle ephambi koluntu lolwandle
ipaki enokufikelela kwi-Harbour Beach ngezantsi.
4.81 out of 5 stars from 714 reviews
4.81 · Izimvo eziyi-714
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi714
I-York Harbour ibisoloko iyeyona ndawo ithandekayo yaseMaine kunye neyona ndawo inabantu abaninzi ekuchitheni ikhefu elwandle. Ingqongwe ziindawo eziphambi kolwandle, izibuko laphuncuka kurhwebo olutshintshe ezinye zeendawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezaziwayo eMaine. Ngokuthe ngqo ngaphesheya ukusuka kwi-Main Inn yi-Hartley Mason Reserve ipaki kawonke-wonke entle eneembono ezikhukhulayo zolwandle kunye neendlela zokuhamba ezikhokelela kwi-Harbour Beach engezantsi kunye ne "Cliff Walk".
Izimvo eziyi-1 937
Idesika yethu yangaphambili iyafumaneka 24/7 ukukunceda ngexesha lokuhlala kwakho.